Fanombohan’ny « Mining for Sustainable Development (M4SD) : Tetikasa ho an’ny fangaraharana sy ny fandraisan’andraikitra eo amin’ny fanomezan-dàlana hitrandraka harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 15 Martsa 2019 ao amin'ny Hetsika,
Tafiditra tanteraka anatin’ny ady amin’ny kolikoly eto Madagasikara ny Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM). Noho ny fahitana fa toa gaboraraka sy tsy voafehy ary mampalaina ny mpampiasa vola ny fomba fanomezan-dàlana hitrandraka ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara hatramin’ny krizy politika tamin’ny 2009 dia niditra ho isan’ny mpanatanteraka ny tetikasa “Harena an-kibon’ny tany ho an’ny fampandrosoana lovain-jafy“ na “Mining for Sustainable Development” (M4SD) ny TI-IM mba hahazoana mijery ireo mety ho trangana kolikoly amin’ny fanomezan-dalana hitrandraka eto Madagasikara. Hampitombona ny fandraisan’anjaran’ireo orinasa mpitandraka harena an-kibon’ny tany hiroso kokoa amin’ny fampandrosoana lovain-jafy eo anivon’ireo firenena manakarena amin’izany no tanjon’ny tetikasa M4SD, sady manatsara ny fangaraharana, ny fandraisan’andraikitra ary ny famehezana mahomby ny fomba fanomezan-dalàna hitrandraka. Fiarahamiasa amin’ny TI Australie sy ny TI Secrétariat (Foibe) ity tetikasa ity, nanomboka tamin’ny oktobra 2018 ka hatramin’ny Febroary 2020. Nohazavaina anio tao amin’ny Hotel Panorama ny vontoatin’ity tetikasa ity.
Fizotran’ny tetikasa M4SD
Misy dingana roa ny fanatanterahana ity tetikasa ity: ny dingana fijerena ireo mety ho trangana kolikoly eo amin’ny sehatra io ary ny dingana hanatanterahana ny ady amin’izany kolikoly izany. Ao amin’ny dingana voalohany , hanatanteraka fanadihadina momba ny fomba fanomezan-dàlana ho an’ireo mpitrandraka kely sy momba ny fanomezan-dàlam-pitrandrahana tsotra ny TI-IM. Ilay dingana fikarohana dia miorina kokoa amin’ny dinika atao amin’ireo mpisehatra tena voakasika mivantana na tsy mivantana amin’ny fanomezan-dàlana hitrandraka, indrindra ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fanjakana, ny solontenan’ireo orinasa mpitrandraka, ireo mpandraharaha ary ireo fiarahamonim-pirenena ao anatin’ity sehatra ity. Ny vokatr’ireo fikarohana ireo no fototra hiaingana amin’ny fanaovana ny adi-sisika ho atao mba hisian’ny mangarahara sy ny fandraisan’andraikitra misimisy kokoa eo amin’ny fomba fanomezan-dàlana hitrandraka harena an-kibon’ny tany.
Ireo vokatra andrasana amin’ny M4SD
- Fametrahana sy fanatanterahan’ny Fanjakana politika sy drafitra mazava sy mahomby momba ny fangaraharana sy ny fandraisan’andraikitra amin’ny fanomezan-dàlana hitrandraka.
- Fametrahana sy fanatanterahan’ny orinasa mpitandraka araka ny tokony ho izy ny fenitra sy ny fomba fanao mitombina amin’ny fangaraharana sy ny fandraisan’andraikitra eo amin’ny fomba fanomezan-dàlana ka hitondran’izy ireo tena toy ny mpandresy amin’ny fanandratana sy ny fitakiana ny mangarahara sy ny fandraisan’andraikitra eo amin’ireo mpikatroka mitovy aminy sy ny governemanta.
- Fahafahan’ny fiarahamonimpirenena sy vondron’olona voakasika mahazo malalaka ireo singam-pahalalana mila fantatra momba ny fanomezan-dàlana hitrandraka sy ny fifanaraham-pitrandrahana ka ahafahan’izy ireo manaramaso izany mba ho tena mangarahara ary koa hisy fandraisan’andraikitra matotra mba hahazoana mitaky ny tena fanovana maharitra amin’ny lafiny fitantanana.
Ny fitaovana “Mining Awards Corruption Risk Assessment (MACRA)”
Namokatra fitaovana antsoina hoe “Mining Awards Corruption Risk Assessment” ny Transparency International mba hanamafisana ilay tetikasa M4SD. Ny tanjona amin’ity dia ny hitiliana sy hijerena ireo antony mahatonga kolikoly ireo mety ho fanararaotra mahatonga kolikoly mahasimba ny fanomezana amin’ny ara-dàlana ireo fifanaraham-pitrandrahana sy ireo fahazoandalàna.
Hôtel Panorama, 15 martsa 2019